Hevitra · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Hevitra · Janoary, 2013
Tantara mikasika ny Hevitra tamin'ny Janoary, 2013
Fahaiza-Mamorona Endrika Hetsi-Panoherana Amoahana Ny Tsy Fahafaliana Ao Espaina
Eoropa Andrefana 24 Janoary 2013
Miavaka amin'ny famoronana sy fananganana hetsika ny Fiaraha-mietana Manohitra ny krizy ao Espaina nanomboka tamin'ny 2011. Anisan'ireo fanta-daza ny fikambanana tahaka ny 15M (Hetsika 15 mey) tamin'ny “fibodoany” ny toerana an-kalamanjana, teo koa ny hetsi-panoherana nokarakarain'ireo vahoaka marobe solontena avy amin'ny sehatra maro samihafa voakasiky ny fampihenana tetibola (fampianarana, fahasalamana, fonenana, sns),...
Ny Hasambarana Isan'Andro Isan'Andron'ireo Zokiolona
Eoropa Andrefana 12 Janoary 2013
Fikambanana mpanatalenta portogey no niara-miasa mandravaka ireo famaritana ny mety atao hoe fahasambarana ho an'ireo zokiolona, natao endrika fanisanandro. Azo jerena ao amin'ny tranokala Felicidário ny fanisanandro an-tserasera.
Ekoatora: Mandà Tsy Hitokana Vala Famokarana Herinaratra Ahodin-drivotra Ny Filoha
Amerika Latina 08 Janoary 2013
Nisafidy ny tsy hanaisotra ny voalin'ilay vala famokarana herinaratra ahodin-drivotra ao Villonaco ny Filoha Ekoatoriana, izay heverina fa mbola tsy vita hatramin'ny farany. Manana ireo fanehoan-kevitry ny mponina ao Loja i Alison Martínez.
TEDxSanaa: Mangetaheta Fanantenana Ny Ao Yemen
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Janoary 2013
Na teo aza ny taona nisafotofoto niainan'i Yemen tamin'ny 2012, niasa mafy ny vondrona Yemenita iray mba hamaranana ny tana amin'ny fomba miabo. Nahavita nametraka sehatra iray, sambany ho an'i Yemen, hahafahana mamelom-panantenana ny tariky ny TEDxSanaa, dia ny hetsika TEDx ao Sanaa ny 31 Desambra teo ambanin'ny teny faneva "Mangetaheta Fanantenana."
Kanji-n'ny Taona 2012 ho an'i Japana
Azia Atsinanana 02 Janoary 2013
Ny Japan Kanji Aptitude Testing Foundation dia nanambara [ja] tamin'ny 12 Desambra 2012 fa ny kanji tamin'ny taona 2012 dia ny volamena (金). Ahoana no fahitàn'ireo mpisera anaty aterineto an'io fanambaràna io sy ny jeritodika nataon'izy ireo ny taona 2012?